मुम्बईमा सुख-दु:खका सारथी, नेपाली कल्लु मामा ! | Nepali Outlook
मुम्बईमा सुख-दु:खका सारथी, नेपाली कल्लु मामा ! नेकपा नेता रावलले ओली र दाहाललाई यस्तो सुझाव दिए बिषाक्त रक्सीका कारण भारतमा मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या धेरै कम्युनिस्ट सरकारकाे दम्भ कहिले सम्म ? कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी, रणवीर र सय कडा दश ?
Published On: February 10, 2019 || 2075 माघ 27 आइतबार , at 4:13 AM
“हामीले सिकाएको बाटाेमा हिड, तर हामीले गरे जस्तो नगर” – जन्मभुमि भन्दा कर्मभुमिमा लाेकप्रिय र दिनानुदिन, नेपालीहरुका सारथी बन्दै अाएका – कल्लु मामा मुम्बईमा भेटिने जाे-काेहि नेपालीलाई भनिरहेका हुन्छन् । सानै उमेरमा पैसा कमाउने हुटहुटि बाेकेर, नेपालकाे राेल्पा जिल्लाबाट भारतकाे मुम्बई छिरेका सबैका कल्लु मामा, अाज पनि हिजाेकै जाेस जागरमा मुम्बईमा नै भेटिन्छन् । कल्लु मामा भन्छन् – “पैसा त के कति कमाए थाहा छैन, तर नेपालीहरुकाे सेवा गर्ने माैका भने बर्षाै देखि पाईरहेकाे छु । म यसमै रमाएकाे छु” ।
उबेला मुम्बईमा अाउदा काम दिने र सहयोग गर्ने काेहीँ नभएका कारण धेरै बर्ष सम्म अाफुले कष्ट भाेग्नु परेको दुखेसो पाेखे । अहिले अाफ्ना पुराना दुखका दिन सम्झिएर पनि नेपालीहरुलाई सहयोग, समन्वय गर्नेगरेको कल्लु मामा बताउछन् ।
यहाँका अविभाबक देखि, नेता भनेपनि दुख पर्दा सबै ठाउँमा सहयोग गर्ने यीनै कल्लु मामा हुन् । उनले धेरै नेपाली युवाहरुलाई मुम्बईमा काम लगाएका छन् ।
अंम्बरनाथ एरियामा हुने प्राय नेपालीहरुका विभिन्न कार्यक्रमहरुका क्याप्टेन समेत उनै हुन्छन् । उनले नयाँ बर्ष, दसै, तिहार र तिजमा बिभन्न याेजना बनाएर मेला लगाउने गर्दछन् । उनले नेतृत्व गर्ने यस्ता कामकाे सयाै प्रवासीहरुले प्रसंम्सा गर्ने गर्दछन् ।
यहाँका पाका उमेरका मान्छे देखि बालबालिकाहरु समेत “कल्लु मामाकाे” नामले बाेलाउछन् । उनी कल्लु मामामा यति प्रख्यात छन्, कि उनको बास्तबिक नाम धेरैलाई थाहा नै छैन् ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर प्रहरी हिरासतमा पुग्ने नेपाली मात्रै हाेईन, भारतीय नागरिक समेत कल्लु मामाकाे फाेनमा, अाफुलाई छुटाउन भन्दै थिए । कल्लु मामाले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा यहाँका प्रहरी प्रमुख देखि बिभिन्न कम्पनीका मालिकहरु दैनिक अाउने हुदा पनि उनकाे यहाँ, यति राम्रो सम्बन्ध बनेको, उनलाई राम्रो बर्षाै देखि चिन्नेहरु बताउछन् ।
“दुख-सुख जे जस्तो भएपनि, म बाँचेकै छु । सबैभन्दा भन्दा राम्रो कुरा, यहाँ अाउने प्राय नेपालीहरुलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने गरेको छु । म यसमै खुसि छु” । कल्लु मामा भन्छन् ।
मुम्बईमा कल्लु मामाले नेपालबाट काम खाेज्दै अाउने सयाैं जनालाई यहाँका हाेलेट तथा अन्य कम्पनीहरुमा काम लगाएका छन् । “मुम्बई, अंम्बरनाथ, कदलापुर एरियामा, कुनैपनि ठाउँमा नेपाली कामदार चाहिए, सबैभन्दा पहिले कल्लु मामालाई – काम गर्ने मान्छे चाहियो भन्दै फाेनकाे घण्टी बज्छ” ।
यश क्षेत्रमा काम गर्ने र बसाेबास गर्ने अधिकाम्स नेपालीहरुका भराेसा हुन् – कल्लु मामा । सानाे हाेस् या ठुलाे काम कुनै पनि काम उनलाई साेध्ने र खाेज्ने गर्छन् ।
हर्क बहादुर बिष्ट उर्फ कल्लु मामा, राेल्पाकाे सुनिल स्मृति गाउँपालिका, मिझिङका हुन् । उनले महाराष्ट्र राज्यकाे मुम्बई एरिया संग नजिकको साईनाे जाेडेकाे करिब ३२ बर्ष भन्दा बढि भयाे । उनी रेस्टुरेन्ट र नेपालीहरुकाे सेवामा रहेकै कारण घरमा पुग्ने फुर्सद समेत पाउदैनन् ।
एक हाेटेल तथा रेस्टुरेन्टकाे क्याप्टेन कल्लु मामा । उनकाे साथमा करिब ३०/४० जना नेपालीहरुले हाेटेलमा किचेन, वईटर र हेल्पर काम गर्दछन् । हर्क बहादुर अर्थात् सबैका कल्लु मामा, बिहान ८ बजे देखि रात २ बजे सम्म जागाराम हुन्छन् । उनलेे अाफ्नाे क्याप्टेनकाे जिम्मेवारी निभाउदै, बेला बेलामा नेपालीहरुलाई पर्ने विभिन्न समस्या समाधानका लागि ठाउँ ठाउँमा पुगेकै हुन्छन् ।
( कल्लु मामा संगकाे कुराकानीकाे अाधारमा )
बिषाक्त रक्सीका कारण भारतमा मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या धेरै
1 मुम्बईमा सुख-दु:खका सारथी, नेपाली कल्लु मामा !
2 नेकपा नेता रावलले ओली र दाहाललाई यस्तो सुझाव दिए
3 बिषाक्त रक्सीका कारण भारतमा मृत्यु हुनेकाे सङ्ख्या धेरै
4 कम्युनिस्ट सरकारकाे दम्भ कहिले सम्म ?
5 कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी, रणवीर र सय कडा दश ?